PharmaCoin စျေး - အွန်လိုင်း XPH ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို PharmaCoin (XPH)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ PharmaCoin (XPH) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ PharmaCoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ PharmaCoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
PharmaCoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
PharmaCoinXPH သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0286PharmaCoinXPH သို့ ယူရိုEUR€0.0242PharmaCoinXPH သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.0219PharmaCoinXPH သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.0261PharmaCoinXPH သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.258PharmaCoinXPH သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.181PharmaCoinXPH သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.638PharmaCoinXPH သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.107PharmaCoinXPH သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.0382PharmaCoinXPH သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.0399PharmaCoinXPH သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.64PharmaCoinXPH သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.221PharmaCoinXPH သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.155PharmaCoinXPH သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹2.14PharmaCoinXPH သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.4.8PharmaCoinXPH သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.0392PharmaCoinXPH သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.0433PharmaCoinXPH သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.892PharmaCoinXPH သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.199PharmaCoinXPH သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥3.03PharmaCoinXPH သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩33.98PharmaCoinXPH သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦10.81PharmaCoinXPH သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽2.11PharmaCoinXPH သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.79
PharmaCoinXPH သို့ BitcoinBTC0.000002 PharmaCoinXPH သို့ EthereumETH0.00008 PharmaCoinXPH သို့ LitecoinLTC0.000497 PharmaCoinXPH သို့ DigitalCashDASH0.000294 PharmaCoinXPH သို့ MoneroXMR0.000305 PharmaCoinXPH သို့ NxtNXT2.07 PharmaCoinXPH သို့ Ethereum ClassicETC0.00405 PharmaCoinXPH သို့ DogecoinDOGE8.2 PharmaCoinXPH သို့ ZCashZEC0.000304 PharmaCoinXPH သို့ BitsharesBTS1.11 PharmaCoinXPH သို့ DigiByteDGB1.05 PharmaCoinXPH သို့ RippleXRP0.0967 PharmaCoinXPH သို့ BitcoinDarkBTCD0.000979 PharmaCoinXPH သို့ PeerCoinPPC0.098 PharmaCoinXPH သို့ CraigsCoinCRAIG12.95 PharmaCoinXPH သို့ BitstakeXBS1.21 PharmaCoinXPH သို့ PayCoinXPY0.496 PharmaCoinXPH သို့ ProsperCoinPRC3.57 PharmaCoinXPH သို့ YbCoinYBC0.00002 PharmaCoinXPH သို့ DarkKushDANK9.11 PharmaCoinXPH သို့ GiveCoinGIVE61.5 PharmaCoinXPH သို့ KoboCoinKOBO6.62 PharmaCoinXPH သို့ DarkTokenDT0.0263 PharmaCoinXPH သို့ CETUS CoinCETI82.01
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Fri, 07 Aug 2020 22:05:02 +0000.